Mayelana NATHI - HEYPACK CO., LIMITED
I-HEYPACK CO., LIMITED
Singumkhiqizi wezimonyo zokupakisha onguchwepheshe.
Ithimba lokuklama ngobuciko neqembu lokuthengisa elisezingeni eliphakeme e-Yiwu Zhejiang.
Sithatha zonke izinhlobo zemithwalo yemfanelo, sinamathela ephusheni lethu.
Izidingo zinquma konke. Amaqembu awina ikusasa. Ukuba nguchwepheshe, ukuthembeka, ukuba nobuciko nokwabelana kuyinkolelo yethu.
Ukuba umsizi wokuthengwa kwamakhasimende nokunikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kuyizinto ezijabulisayo kithi.
I-HEYPACK iqala ukupakisha kwezimonyo ukuhweba kwangaphandle ngo-2009. Kuze kube manje i-HEYPACK inesistimu ephelele yokukhiqiza nokuthumela. Iqoqo leplastiki nensimbi nephepha noqalo, ukufuthwa kwebhodlela nomjovo, ukulahlwa kwendawo okufana ne-electroplating, frosting, umbhalo oqoshiwe, ukufafaza. Ukuphrinta kwe-logo njenge-screen, offset, ukunyathela okushisayo, ukudluliswa kwamanzi, ukufaka ilebula. Ngaphandle kwalokho, isampula yamahhala, ukuthunyelwa kolwandle kwe-DDU, ukuthunyelwa komoya okungabizi kakhulu. Umgomo wethu wokugcina ukuthi ube ngumlingani wakho webhizinisi onokwethenjelwa!
Imikhiqizo yethu eyinhloko amashubhu e-PE yezimonyo, amashubhu we-aluminium-plastic laminated, amabhodlela e-PE & PET ashaya, amabhodlela angenamoya namabhodlela kakhilimu, amabhodlela engilazi ne-aluminium, ukwakheka nokupaka amakha.
Besilokhu sihlinzeka ngokusebenza okwenziwe ngezifiso okuphezulu.
Singumsizi wokuthenga osebenzayo wamakhasimende.
- Lona ngumsebenzi onomuzwa wokuzuza okuthile.
Sibheke phambili ukubambisana nawe ngobuqotho.